Ambience: Iingcebiso zeMveliso ezifanelekileyo kwiMxholo | Martech Zone
Ambience: Iingcebiso zeMveliso ezifanelekileyo kwiMxholo
NgoLwesine, Julayi 24, 2014 NgoLwesine, Julayi 24, 2014 Douglas Karr
Kukho umhlaba womxholo phaya okhulayo mihla le. Uninzi lwecebo lokuthengisa imveliso kukufumana uphononongo lwemveliso lusasazwe kwiwebhu yonke, kutsala abo bafundi babuyela kwiphepha lemveliso kwaye batyhale umfundi ukuba aguquke. Iqonga likaSophia le-ecommerce Ambience ™ lifaka umfanekiso wemveliso kunye neengcebiso ngaphakathi komxholo-zilungiselelwe ukujongwa kwaye kufanelekile kumxholo ekuxoxwa ngawo. Oku kuqhuba ngamazinga aphezulu kakhulu okuguqula indawo yeSophia.
I-Ambiance ™ yi-e-commerce widget ehleli ngokungacacanga ecaleni komxholo womshicileli ukubonisa ngokuzenzekelayo iimveliso ezifanelekileyo zomdla kubafundi ngelixa bekhangela. Ngokwenza umxholo uthengwe, kubonelela ngenye indlela ingeniso yabapapashi kwaye ngenxa yokuba iimveliso zincedisa umxholo okufuphi, abafundi bazibandakanya kwangoko ekhokelela ekuphuculweni kwesiza kunye nokunyaniseka okwandileyo.
Olu luphuhliso olunomdla kwiwebhu, ukudibanisa amava emveliso kunye neendawo zokuthenga kunye nolwazi kunye nomxholo womxholo omkhulu. Abapapashi ababhala umxholo omkhulu banokwenza ngcono imali ngawo. Kwaye iisayithi ze-ecommerce ezineemveliso abanethemba lokuzikhuthaza kwiindawo zokupapasha ngoku banethuba lokuba iimveliso zabo zibonwe kwaye zicofwe.
tags: abakhangisiubumnandiumxholo wokuthengaIwijethi yorhwebo ye-eIwijethi ye-ecommerceiingcebiso ngemvelisoabavakalisiNozipho
Thenga indawo yakho: Iifowuni zeNtengiso eziSebenziselwe uMthengi